Tarehin-tsoratra Disney raha nitaona an'i Tim Burton | Famoronana an-tserasera
Nanomboka ny diany namakivaky ny tontolon'ny sinematografia i Tim Burton maha-animator ho an'i Disney. Ny sangan'asany amin'ny sarimiaina dia fantatra tsara ary amin'ny Nightmare Before Christmas dia manana ny sangan'asany iray sangan'asa isika. Mpanatontosa sarimihetsika izay nanana fironana foana amin'ny zava-maizina rehetra, ireo mpilalao mandeha amin'ny aloka ary ho an'i Eduardo Scissorhands izay mety ho ilay tena maneho ny toe-tsain'ity mpanakanto kanto ity.
Matetika isika dia mitondra mpanakanto sasany izay mamorona fomba iray hisarihana ny saina hanandrana hampiseho antsika hoe hanao ahoana izy ireo Toetran'ny Game of Thrones raha Disney no nitaona azy ireo, hanao ny mifanohitra amin'izany ankehitriny. Ahoana raha i Tim Burton no miandraikitra ny fitarihana zavakanto amin'ireo sarimihetsika Disney fantatsika rehetra. Azo antoka fa hahita zavatra mitovy amin'ilay nasehon'i Andrew Tarusov isika.
Fanandramana lehibe nataony mba haka sary an-tsaina ny fomba nitondran'i Tim Burton ny sasany amin'ireo olo-malaza Disney angano toa ny Beauty and the Beast, Bambi na Pinocchio. Ny marina izay manao asa tsara, na dia mety manana kofehy kely aza isika izay hoeritreretin'i Burton raha fantany io andian-tsary io.
Na izany aza, manampy antsika hanavotra Tim Burton io fa taorian'ny famokarana Hollywood ara-barotra maro hafa dia nandia vanim-potoana mainty izy izay nandehanan'ny mpanakanto maro tamin'ny dingana sasany tamin'ny fiainany. Azo antoka fa hahita azy hitadidy bebe kokoa momba an'i Eduardo Scissorhands na Nightmare talohan'ny Krismasy isika.
Rehefa mipetraka any Andrew Tarusov izahay, teraka tany Rosia ary mipetraka any Los Angeles izy hahafantatra fa efa nandalina ny kanto sy ny sary mihetsika nandritra ny 10 taona. Mpankafy lehibe ny kilasin'i Disney, araka ny hita ao amin'ireo sary roa ireo ary afaka mahita izany ianao ny tranonkalanao manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Raha i Tim Burton no nitarika ny sarimihetsika Disney